Asante .Bible T) Twer3 Kronkron Hwehw3 na hu nno)ma bebree a 3fa Asante Twi Twer3 Kronkron ho, na wo ara ankasa kenkan
Hwehw3 na hu nno)ma bebree a 3fa Asante Twi Twer3 Kronkron ho, na wo ara ankasa kenkan
T) Twer3 Kronkron
ASANTE TWI TWERƐ KRONKRON HO ABAKƆSƐM
Ɛyɛ Basel Asɛmpatrɛ Adwumayɛkuo no na wɔdii kan kyerɛɛ Twerɛ Kronkron ase kɔɔ Twi kasa mu. Afe 1828 mu na wɔtee saa Asɛmpatrɛ Adwumayɛkuo yi nka wɔ Sika Mpoano (Gold Caost). Basel Asɛmpatrɛ Abɔfoɔ yi ne wɔn aboafoɔ a wɔka Twi kasa no bɔɔ mmɔden papaapa sɛdeɛ wɔde Twi kasa no bɛbɔ Asɛmpa no dawuro. Yei maa Twerɛ Kronkron asekyerɛ bɛyɛɛ kwan pa bi a ɛboa ama wɔdii wɔn dwuma pa yi.
Ɛwɔ nwoma mu sɛ, afe 1846 mu na Basel Asɛmpatrɛ Abɔfoɔ yi dii akotene wɔ Twerɛ Kronkron no fa bi a wɔkyerɛɛ aseɛ a ɛdi kan kɔɔ Twi kasa mu. Din a na ɛda so ne Ojikassa Kannehuma Yankupong Asem. Nwoma yi mu nsɛm yɛ Twerɛ Kronkron mu abasɛm, Mmara Nsɛm Du no, Awurade Mpaebɔ no ne Asomafoɔ no Gyidikasɛm no.
Jesus Film in Ga
Mma adɔeɛ ne nokorɛ nnnyaa wo; fa kyekyere wo kɔn, twerɛ no w’akoma pono so.
- Mmebusɛm. 3.3